10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ
ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွား ဂျပန်, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ရထားခရီးသွား USA, ဥရောပခရီးသွား
ကောင်းကင်သို့ပျံတက်သည်။, ဖော်ပြပါ 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များသည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဗိသုကာပညာရှင်များ၏ လက်ရာများဖြစ်သည်။. အနာဂတ် ဒြပ်စင်များ ရောနှောခြင်း။, ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အစိမ်းရောင်အင်္ဂါရပ်များ, ဤ 10 လှပသော အဆောက်အဦများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လာရောက်လည်ပတ်မှု အများဆုံး အထင်ကရနေရာများထဲမှ အချို့လည်းဖြစ်သည်။.
1. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ: Shard
306 မီတာမြင့်သည်။, Shard tower သည် လန်ဒန်တွင် အထင်ရှားဆုံး မိုးမျှော်တိုက်ဖြစ်သည်။. နှင့် လန်ဒန်ရှိအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းပလက်ဖောင်း, မိုးမျှော်တိုက်၏ ခေါင်မိုးပေါ်မှ လှပသော မြို့၏ ကောင်းကင်ယံကို သင်မြင်နိုင်သည်။. ကြည့်ရှုခြင်း ပလက်ဖောင်း ဖြစ်ပါ သည်။ 244 မီတာများနှင့် လန်ဒန်မြို့ထောင့်တစ်ခုစီသို့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံးနီးပါး မြင်ကွင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ 2003, Shard သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်သည်။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အများစုမှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများကြားတွင် တမူထူးခြားသော ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းသည် ထင်ရှားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။. Shard ဒီဇိုင်းသည် ဖန်အပိုင်းအစများ ပါ၀င်ပြီး ဖန်သားကြမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။, ရှိပါတယ် 11,000 Shard ၏ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ဖန်ပြားများ. ဒါကြောင့်, လန်ဒန်ကိုရောက်ရင် သွားလည်သင့်တယ်။, ကြမ်းပြင်ရှိ Shard စားသောက်ဆိုင်များတွင် အံ့သြဖွယ် နေဝင်ချိန် ညစာနှင့်အတူ အတူတူ 31-33, UK တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။.
2. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ: Evolution Tower မော်စကို
246 မီတာမြင့်သည်။, မော်စကိုမြို့ရှိ Evolution Tower သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. လှပသောမိုးမျှော်တိုက်သည် မော်စကိုစီးတီးရှိ မော်စကို၏စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကို လွှမ်းမိုးထားပြီး မော်စကိုမြစ်ကို အပေါ်စီးမှမြင်သည်။. မီထရိုဘူတာရုံနှင့်, ရှော့ပင်းမောလ်, ရုံးများ, နှင့် အစိမ်းရောင်နယ်မြေများ, အဆိုပါ Evolution Tower သည် မော်စကိုတွင် လာရောက်လည်ပတ်မှု အများဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဗိသုကာဖွဲ့စည်းပုံသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်။, Evolution ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖန်တီးတယ်။ ရုရှား၌လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများ. ဒါကြောင့်, ရုရှားမိုးမျှော်တိုက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခရီးသွားဓာတ်ပုံများစွာကို ပြသထားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အတုယူစရာ အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
Graz တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူဘူဒါပက်မှ
3. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ: အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အဦး
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံး ရုံးခန်းများ, အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အဦကတည်းက 1931. ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ ဆောက်လုပ်ရန် အပြိုင်အဆိုင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ထူးထူးခြားခြား New York scraper ကို 1920 ခုနှစ်များတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။. ဗိသုကာပညာရှင် Raskob နှင့် Smith တို့သည် Manhattan ၏ကောင်းကင်ယံတွင် လွှမ်းမိုးထားသော မိုးမျှော်တိုက်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲသောအခါ Empire State Building သည် အပြေးပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 381 မီတာ.
အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အအုံသည် နယူးယောက်မြို့၏ အထင်ကရနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၃၈ လွှာကနေ, အိပ်မရတဲ့မြို့နဲ့ နေထွက်တာကို ကြိုဆိုနိုင်ပါတယ်။. Central Park ၏ရှုခင်းများနှင့်အတူ, ပဉ္စမရိပ်သာလမ်း၊ Times Square သို့, Empire State Building မှ မြင်ကွင်းများသည် မေ့မရနိုင်ပါ။.
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအမြင့်ဆုံး မိုးမျှော်တိုက်, Shanghai Tower ရောက်တယ်။ 632 မီတာ. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရှန်ဟိုင်းကောင်းကင်ယံကို လွှမ်းမိုးထားသည်။, Shanghai Tower သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ မြင်ကွင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သော ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။.
ထပ်လောင်းထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်မှန်မျက်နှာစာ, လှုပ်နေသောထိပ်နှင့်, ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ အစိမ်းရောင်အတွင်းပိုင်းနေရာများဖြစ်သည်။. အစိမ်းရောင် အပြင် ဒီဇိုင်း, မျှော်စင်ကို မြို့တွင်းရှိမြို့အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။, ဟော်တယ်, လက်လီနေရာများ, ရုံးများ, နှင့် အများသူငှာ ဧည့်သည်များအတွက် နေရာများ. Shanghai Tower သည် တစ်ခုတည်းသော မဟုတ်ပါ။ 10 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ, ဒါပေမယ့် အကြီးဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။, လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်မှု 16,000 လူထု.
5. Bank of China Tower ဟောင်ကောင်
ဟောင်ကောင်၏ ကောင်းကင်ယံကို လွှမ်းမိုးထားသည်။, Bank of China အဆောက်အဦသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အထူးခြားဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. တွင် 367 မီတာ, Bank of China Tower သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အမြင့်ဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် အထင်ရှားဆုံး အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။. အပြင်ဘက်တွင် ချွန်ထက်သော အစွန်းများနှင့် တြိဂံပုံစံများ, Bank of China က သင့်ကို နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။.
ဟောင်ကောင်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ အများစုသည် ဤမိုးမျှော်တိုက်ကို ထူးခြားစွာ တွေ့ရှိကြသည်။, အထင်ကြီးမခံတဲ့ သူတွေရှိတယ်။. အကြောင်းရင်းမှာ BOC ကို အခြားတစ်ခုနှင့် ခွဲခြားနိုင်သော အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။ လှပသောအဆောက်အဦးများ တရုတ်ပြည်မှာ. ချွန်ထက်သောအနားများနှင့် X, Feng Shui တွင် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော သင်္ကေတများဖြစ်သည်။. သို့သျောလညျး, ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော မကောင်းသောကံကြောင့် ခရီးသွားများသည် ဤဗိသုကာအလှကို နေ့တိုင်း စွဲလန်းခြင်းမှ မတားဆီးနိုင်ပါ။.
ရထားနှင့်အတူ Prague မှဗီယင်နာ
မှတစ်ခုဖြစ်သော 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ, အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. Marina Sands သည် Marina Bay ကို မျက်နှာမူထားသည်။, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်, တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ, ပြဇာတ်ရုံတစ်ခု, တာဝါတိုင်သုံးခု၌, 340 မီတာရှည်သော SkyPark နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။. ဖြည့်စွက်ကာ, အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး ရှုပ်ထွေးမှုတွင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆုံးမရှိ ရေကူးကန် ရှိသည်။.
ဗိသုကာပညာရှင် Moshe Safdie က မိုးမျှော်တိုက်၏ ဒီဇိုင်းသည် ကတ်ပြားများဖြင့် မှုတ်သွင်းထားကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။. infinity pool မှ စင်္ကာပူ၏ အံ့သြဖွယ် မြင်ကွင်းများ, 57 လွှာတွင်. ဖြည့်စွက်ကာ, Gardens by The Bay မှ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Marina Bay Sands မိုးမျှော်တိုက်ကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။, စင်္ကာပူမှာ လည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့ နောက်တစ်နေရာ.
7. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ: Tokyo Skytree ၊
နှင့်2လေ့လာရေးစခန်းများ, Tokyo Skytree မိုးမျှော်တိုက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက် ၅ ခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. တွင် 634 မီတာ, ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးကဖေးမှာ ကော်ဖီသောက်လို့ရပါတယ်။, တိုကျိုမြို့၏ အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းများနှင့်အတူ. Skytree ကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွှင့်မျှော်စင်အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တိုကျို၏ အရေးကြီးဆုံး အထင်ကရနေရာများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။.
ရှုခင်းတွေအပြင်, နှင့် ကော်ဖီဆိုင်, ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်ငါးပြတိုက်နှင့်နက္ခတ်တာရာပြခန်းကိုသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။. ရှုခင်းကြည့်ခန်းများ ကမ်းလှမ်းသည်။ 360 ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမြို့၏ ဒီဂရီမြင်ကွင်းများ, နှင့်အာရှ. အဓိကအချက်, တစ်နေကုန် ရှုခင်းတွေကြည့်ရင်း တိုကျိုမြို့ရဲ့ Skytree မိုးမျှော်တိုက်ရှိ အံ့ဖွယ်အဆောက်အဦးများစွာကို သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။.
8. Canton Tower ကွမ်ကျိုး
တရုတ်နိုင်ငံသည် ခေတ်နှင့်ရှေးကျသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရောနှောထားသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။, တိမ်တွေပေါ်တက်လာတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်တွေရဲ့ဘေးမှာ ဘုရားကျောင်းတွေ ရှင်သန်နေတယ်။. တစ်ခုမှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ ကွမ်ကျိုးနှင့် နက္ခတ်ဗေဒင် Canton Tower တို့ဖြစ်သည်။. ရောယှက်မှာလား။ 604 မီတာအမြင့်, Canton Tower သည် ကွမ်ကျိုးရှိ မည်သည့်နေရာမှ မြင်နိုင်သည်။.
Canton Tower တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ ထိပ်တွင် ရထားစီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။. ဒါကြောင့်, အမြင့်ကို မကြောက်ရင်, ညဘက်လာပါ။, မျှော်စင်ကို သက်တံရောင်တောက်တောက်ဖြင့် လင်းထိန်သောအခါ. ရထားတွဲမှ ကုန်းပတ်ကြည့်ရှုသည့် လက်မှတ်အထိ, Canton Tower ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် ထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြေခံမေးရိုးပြုတ်ကျနေသောခြေရင်းတွင်ရပ်နေရုံသာဖြစ်သည်။.
Lucerne မှ Zurich သို့ရထားတစ်စီးဖြင့်
9. Liebian International အဆောက်အဦ
အကြီးဆုံးရေတံခွန်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ မိုးမျှော်တိုက်များ၏ ခမ်းနားထည်ဝါမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။. Liebian International မိုးမျှော်တိုက် ဖြစ်ပါ တယ်။ 121 ၎င်း၏မျက်နှာစာများပေါ်တွင် ရေတံခွန်တစ်ခုနှင့် မီတာမြင့်သည်။. အမြင့်ဆုံးရေတံခွန်သည် ရေစုပ်စက်လေးခုနှင့် ၎င်း၏အောက်ခြေရှိ မိုးရေချိန်များကို စုပ်ယူပေးသည်။. မင်းရဲ့ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်မှာ ဒီ ထူးထူးခြားခြား အဆောက်အဦးကို မင်းတွေ့နိုင်တယ်။, အထူးသဖြင့် Guiyang အတွက်, တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတွင်.
Liebian မိုးမျှော်တိုက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးမဟုတ်ပေ။, ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ထိပ်တန်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။5ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ.
10. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ: Agbar Tower Barcelona
Torre Glories သည် ဘာစီလိုနာရှိ လှပသော အထင်ကရနေရာများထဲမှ ထူးထူးခြားခြား မိုးမျှော်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၃၈-ထပ် 144 မီတာမိုးမျှော်တိုက်သည် ပြင်သစ်ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ဦး၏ ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။. လှပသော မိုးမျှော်တိုက်သည် ကောင်းကင်သို့ တက်လာသည့် ရေတွင်းသဏ္ဍာန်ရှိပြီး Montserrat တောင်နောက်တွင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။. အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင် မျက်နှာစာတစ်ခုလုံးကို မှန်နဲ့လုပ်ထားတာကို သတိထားမိမှာပါ။.
သို့သျောလညျး, Agbar Tower ၏ အထူးခြားဆုံး အင်္ဂါရပ်မှာ ရောင်စုံအလင်းတန်းများ ဖြစ်သည်။. စပိန်မိုးမျှော်တိုက်တွေရှိတယ်။ 4,500 LED စက်များ. ဤ LED ကိရိယာများသည် ရုပ်ပုံများကို ပြသပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ 16 အရောင်သန်း. ထို့အပြင်, Agbar Tower ကို သင် ဝိုင်းထားလျှင် အခြားသော အံ့သြဖွယ် အထင်ကရ နေရာ တစ်ခု ကို ရည်ညွှန်း သည်ကို သင် သတိပြုမိလိမ့်မည်, Gaudi ၏ Sagrada မိသားစု. ဒါကြောင့်, ဒီလှပတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးကို အချိန်မရွေး သွားကြည့်ချင်တယ်။, တစ်နေ့တာလုံး ချီးကျူးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ခရီးထွက်ရန် စီစဉ်ရာတွင် ကူညီရန် ပျော်ရွှင်ပါမည်။ 10 ရထားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံးမိုးမျှော်တိုက် ၁၀ ခု” ကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းလိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
လှပသော မိုးမျှော်တိုက်များ	ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံးအဆောက်အအုံများ	ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလှဆုံး မိုးမျှော်တိုက်များ	မိုးမျှော်တိုက်များ	မျှော်စင်
ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
ထိပ်တန်း3ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီသည်အကောင်းဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများ
ရထားခရီးသွားလာဘူလ်ဂေးရီးယား, ရထားခရီးသွားဖင်လန်, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, ဥရောပခရီးသွား